Doorashadii Madaxweyne ee Galmudug oo Mar Kale Dib loo Dhigay – Radio Daljir
Doorashadii Madaxweyne ee Galmudug oo Mar Kale Dib loo Dhigay
Abriil 29, 2017 3:53 g 0
Doorashadii madaxweyne ee Galmudug ayaa mar kale dib-u-dhac ku yimid, muddo horlehna loo qabtay, taas oo loo madlanaa in ay dhacdo berri oo Axad ah, bisha Abriil na ay tahay 30-ka.
Dib-u-dhaca cusub ee soo wajahay doorashada maamulka Galmudug ayaa ku siman muddo saddex maalmood ah, waxaana loo qabtay haatan in ay dhacdo 3-da bisha soo socota ee May. Wakhti kordhintaan cusub waxaa sameeyey guddiga doorashada madaxweynaha ee maamulka Galmudug, waxaana ay ku saleeyeen arrimo farsamo oo daruuri ka dhigaya in saddexdaas maalmood dib loo dhigo doorashada sida ay sheegeen.
Guddoomiyaha guddiga doorashada Galmudug Maxamed Xasan Geelle oo warbaahinta la hadlay ayaa baarlamaanka iyo shacabka Galmudug ka codsaday in ay ku qancaan muddo kordhintaasi ay sameeyeen guddi ahaan, taasoo uu sheegay in ay u fiiriyeen oo kaliya danta Galmudug, balse aysan cidna ugu hiilinayn.
Guddoomiye Maxamed Xasan Geelle, ayaa dhinaca kale sheegay haddii muddo kordhintaasi ay sameeyeen ay ku qabsoomi waydo doorashadu in uu isla guddiga doorashada iska casili doono.
Waxaana shirkiisii jaraa’id uu ahaa sidaan oo HOOS ka DHEGAYSO